ဗမာဒရိုင်ဘာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဗမာဒရိုင်ဘာ
Posted by ေမာင္ရိုး on Jun 14, 2017 in Creative Writing, Facebook | 37 comments
#ဗမာဒရိုင်ဘာ . .
ခေတ်မကောင်းလို့ ကားမောင်းစားနေရတဲ့ဘဝမှာ အဖြစ်တွေကတော့ ပြော မပြောချင်ဘူးဗျို့ . .
သို့သော်လည်း မနေနိုင်တော့ လက်တို့ပြီးကိုပြောရဦးမယ်ဗျာ . . ။
ဒီလိုဗျ . . .
ဒီကနေ့ မနက်စောစော ကျုပ်မိတ်ဆွေကြီးတစ်ယောက်က ဖုန်းဆက်ပြီးအကူအညီတောင်းတယ်လေ ။
သူနေထိုင်မကောင်းလို့ ဒီနေ့မနက်လေဆိပ်ပို့ရမယ့် ဧည့်သည်ကို သူ့ကိုယ်စားပို့ပေးဖို့ပေါ့ဗျာ ။ ကျုပ်လည်း ဝမ်းသာအားရခေါင်းညိမ့်လိုက်တယ် . . ဖွတ်ကလိဒင်္ဂ ါးလေးရတော့မှာကိုးးးဗျ ။
ဒါနဲ့ ဟိုတယ်ကို ချိန်းထားတဲ့အချိန်သွား ၊ ပြီးတော့ ဧည်သည်နိုင်ငံခြားသားကိုခေါ်ဆောင်ပြီး လေဆိပ်ကိုမောင်းတော့တာပေါ့ ။
ဒီဘိုးတော်က အတော်လေးတော့ အမေး အမြန်းထူသား . . . ။
လမ်းတလျောက်လည်း ရိုက်လိုက်တဲ့ဓတ်ပုံ ဗွီဒီယိုဆိုတာ မနားတမ်းပါဘဲ ။
ပြီးတော့ ပါးစပ်ကလည်း ပွစိပွစိနဲ့ ဝေဖန်ရေးလေကန်ရေးတွေလုပ်လာတာ . . ။ကျုပ်ကတော့ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ကိုယ့်ကားကိုဘဲ မောင်းနေရတာပေါ့လေ . . ( အမှန်က ကျုပ် သူ့စကားကိ်ုအပြည့်အဝနားမလည်တာပါ – ဤကားးး စကားချပ် )
ဒီလိုနဲ့ မီးပွိုင့်တစ်ခုကိုရောက်တော့ မီးစိမ်းရာကနေ ရုပ်တရက်နီသွားပါလေရော . .
ကျုပ်လည်း အားနာနာနဲ့ဘဲ ဘရိတ်နင်းရတာပေါ့လ . .
သူကမေးသဗျ ” မင်းတို့ မီးပွင့်မှာ အချိန်ပြတဲ့စနစ်မရှိဘူးလားတဲ့ ”
” တချို့ပွိုင့်တွေရှိပါတယ် ဒီပွိုင့်ကပျက်နေလို့ပါ ” လို့ ပြန်ဖြေလိုက်ရတာပေါ့ ။
သူကထပ်မေးပြန်တယ် . .
“မင်းတို့ပွိုင့်မှာ လူတွေလမ်းကူးဖို ့အမှတ်အသားလည်း အချက်မပြပါလား ” တဲ့ ။
ကျုပ်လည်း ခတ်တည်တည် နဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ် . .
” မလိုဘူး လူတွေနဲ့ကားတွေက နားလည်မှုရှိတယ် အားလုံးအကျင့်ပါနေပြီ ” လို့ . . .
မကြာပါဘူး . .
မီးပွိုင့်လွတ်တော့ ကျုပ်လည်းမောင်းတာပေါ့လေ .။ အဲ့အချိန်မှာဘဲ ကားရှေ့ကနေ ကောင်မလေးတစ်ယောက်က ဘာမပြောညာမပြောနဲ့ လက်ညိုှးလေးထောင်ပြီး ဖြတ်ပြေးပါလေရော . . .။
ကျုပ်လည်း ဘရိတ်ကိုဖိကြိတ်ရပြန်တာပေါ့လေ ။
ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့ ဖေါရိန်းဘိုးတော်လည်း စတုပစ် ဘူုးရှစ်တွေကို ဂါထာရွတ်သလိုမန်းမှုတ်ရင်း ကျုပ်ကိုမေးပြန်တယ် ။
” ဒီလို လုပ်ပြတာဘာအဓိပ္ပါယ်လဲ ” ဆိုပြီး ကောင်မလေးလုပ်သလို လက်ညှိုးလေးထောင်ပြတယ်လေ ။
ကျုပ်လည်း စိတ်ပေါက်ပေါက်ရှိတာနဲ့ ဒီလ်ိုပြန်ဖြေလိုက်တယ်ဗျို့. . . ဟေး ဟေး . .
” အဲ့ဒါ အဓိပ္ပါယ် နှစ်မျိုးရှိတယ် ။ စာသင်ခန်းထဲမှာ သေးပေါက်ချင်ရင် ဆရာမကို အဲ့လိုပြရတယ် ။ဒါဆို ဆရာမက သေးသွားပေါက်ခွင့်ပြုတယ် ။ နောက်တစ်မျိုးက မောင်းလာတဲ့ကားရှေ့ကလမ်းဖြတ်ကူးချင်ရင်လည်း အဲ့လိုပြရတယ် ။ ဒါဆို ဒရိုင်ဘာက ရပ်ပေးကြတယ် ” လို့ . . .
ဘာရမလဲ ဗမာဒရိုင်ဘာဘဲဗျာ . . မေးတဲ့ဖေါရိန်းဘိုးတော် ပါးစပ်ပြဲသွားတာပေါ့ . .
ပြီးမှ ခေါင်းလေးတငြိမ့်ငြိမ့်လုပ်ရင်း . .
” မင်းတို့ အချက်ပြဆက်သွယ်ရေးက အတော်လေး အဆင့်မြင့်တာဘဲ ” တဲ့။
ဗမာဒရိုင်ဘာလေ သိတယ်မှတ်လား ကိုယ့်နိုင်ငံကိုတော့ အထင်မသေးအောင် ဒီလိုကာကွယ်ပလိုက်တာ. . . ။
ဒီလိုနဲ့ ဆက်မောင်းလာလိုက်တာ တက္ကသိုလ် ရိပ်သာလမ်းကနေ ကမ႓ာအေးဘုရားလမ်းပေါ်ဖြတ်တက်မယ်ပေါ့ ။
ကျုပ်က အကြံနဲ့ဗျ ။ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှာ ကျုပ်တို့ရဲ့ကမ႓ာကျော်လူထုခေါင်းဆောင်အိမ်ကိုပြပြီးကြွားမလို့လေ ။
တချိန်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အိမ်ကိုဓတ်ပုံရိုက်ဖို့ဆိုတာ အိမ်မက်တောင်မမက်နိုင်ဘူးမှတ်လား ။
ဒါနဲ့ အမေ့အိမ်ရှေ့နားလည်းရောက်ရော ဘရိတ်လေးအသာမှေးပြီး . .
” ကျေးဇူးပြုပြီးလူကြီးမင်းရဲ့ ဘယ်ဖက်ခြမ်းကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ပါခင်ဗျာ . . မြင်နေရတဲ့ခြံဝန်းနဲ့အိမ်ဟာ ကျနော်တို့ရဲ့လူထုခေါင်ဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အိမ်ပါ . . ”
ကျုပ်ဘေးက ဖေါရိန်းဘိုးတော်လည်း ဓတ်ပုံတွေ တဖြတ်ဖြတ်ရိုက်နေလေရဲ့ ။
ကျုပ်ကတော့ အမေ့မျက်နှာနဲ့ ဒီဘိုးတော်ကို ခတ်ကြွားကြွားလေး လုပ်လိုက်ရတော့ ခေါင်းလေးခတ်မော့မော့ပေါ့ဗျာ ။
ဓတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးတော့ ကျုပ်ဘက်ဆတ်ကနဲ့လှည့်ပြီးမေးတယ် . .
” ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆိုတာဘယ်သူလဲ ။ သူက ဘာလဲ . ” တဲ့
” ငင် !! ခင်ဗျားမသိဘူးလား ” လို့ဆိုတော့
” NO ” တဲ့
သေလိုက်ပါတော့ လဒကြီးရယ် ကျုပ်ဖြင့် ဘာဆက်ပြောရမှန်းတောင်မသိဘူး ။ဒါနဲ့များ ဓတ်ပုံရိုက်နေသေးတယ် . .
” အဲ့ဒါ ကျုပ်တို့ရဲ့နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်ဗျ ” လို့ ခတ်ပြတ်ပြတ်ပြောပြီး စကားဖြတ်လိုက်တော့တယ် ။
ဟုတ်တယ်လေ . . ဒီလို ဘူမသိကိုးမသိကောင်ကို ဖဲရိုက်သင်နေရင် လေဆိပ်မရောက်ဘဲ လမ်းမှာတင် မိန်းမရသွားလိမ့်မယ် . . . ။
အဲ . . ပြဿနာက မပြီးသေးဘူးဗျ ။
ကမ႓ာအေးဘုရားလမ်းပေါ်ရောက်လို့ တစ်နေရာလည်းရောက်ရော ကျုပ်ကို လက်ကုတ်ပြီးအရေးတကြီးမေးပြန်တယ် .. ။
” အဲ့ဒါ ဘာကြီးတုန်း ” တဲ့ ။
ကျုပ်လည်း ညာဖက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ လမ်းဘေးမှာ ရေအလျူလုပ်ထားတဲ့ရေအိုးစင်ကိုတွေ့ရသဗျ ။ခက်တာက ရေအိုးတွေက ရေညှိတွေတက်ပြီးညစ်ပတ်နေတာပါ။
ပထမတော့ ကျုပ်က လက်ဆေးရေလို့ လိမ်ေ့ပြာဦးမလို့ဘဲ ။ ကျုပ်တို့ကြည့်နေတုန်း လူတစ်ယောက်က ရေခတ်သောက်လိုက်ပါလေရော . . .
ကျုပ်လည်း ခတ်တည်တည်နဲ့ . .
” အဲ့ဒါ သောက်ရေအိုးလေ ။ ဘယ်သူမဆို ရေဆာရင်သောက်လို့ရတယ် . . ”
” အိုးးးးးး ဂေါ့ဖ် . . ”
ဘိုးတော် မျက်လုံးပြူးသွားတယ် ။
သူ့စိတ်ထဲတော့ ဘက်တီးယီးယားတွေ အစုလိုက်အပြုံလိုက်မြိုချနေတယ်လို့ ထင်နေမလားပဲ . .
ကျုပ်လည်း ခတ်ချဉ်ချဉ်ရှိတာနဲ့ . .
” လူကြီးမင်းရော ရေဆာပါသလားခင်ဗျာ . . ” လို့ မေးလိုက်ရော
” အိုးးး နိုးးး နိုးးးး နိုးးးးးး ရေမလိုဘူးးးး ”
ဟဲ ဟဲ သိ်တယ်မှတ်လား ဗမာဒရိုင်ဘာလေ . .
ကျုပ်တို့ ခင်ဗျားတို့ဗိုက်တွေကတော့ ဒီရေအိုးတွေလောက်တော့အပျော့ပေါ့ဗျာ ။
ကျုပ်တို့ နေ့စဉ်သောက်နေရတဲ့ဂျိုးဖြူရေဆိုတာသောက်ပြီးရင် ဘယ်လိုဘက်တီးယီးယားတွေမှ ဒုက္ခမပေးနိုင်တော့ဘူးဗျု့ိ . . . အဟုတ်
ပွဲကပြီးပြီလားဆိုတော့ မပြီးသေးဘူးခင်ဗျ . .
ကမ႓ာအေးဘုရားလမ်းကနေ ပြည်လမ်းပေါ်ကိုချိုးကွေ့လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးရဲ့ ဇတ်လိုက်ကျော်များဖြစ်တဲ့ YBS တွေနဲ့တွေ့ရပါပြီ ။
ပြည်လမ်းတလျှောက် အလုအယက်မောင်းနှင်လာတဲ့ ဘတ်စ်ကားတွေကိုကြည့်ရင်း အဲ့ဒီဘိုးတော်ဓတ်ပုံတွေရိုက်နေပြန်တယ် ။
ကျုပ်လည်း ဒီတခါတော့ကြွားလိုက်ဦးမှ လို့တွေးပြီး . .
” လူကြီးမင်းခင်ဗျ . . ကျနော်တို့ ဘတ်စ်ကားတွေက မကြာသေးမှီကဘဲ စံနစ်သစ်ပြောင်းထားပါတယ် ။ခင်ဗျားကြားဖူးမှာပေါ့ စင်္ကာပူမှာ SBS . . ရန်ကုန်မှာ YBS . . ”
ဟဲဟဲ သိတယ်မှတ်လား ဗမာဒရိုင်ဘာလေ . . .
နဲနဲလေးတော့ ပွတ်ဆွဲလိုက်ရမှ . .
အဲ့ဒီချိန်မှာဘဲ ဘေးကကျော်တက်သွားတဲ့ YBS မီနီဘတ်စ် တစ်စီးကိုကြည့်ပြီး
” မင်းတို့ကားတွေက တော်တော်တော့ စုတ်တယ်နော် ” တဲ့ . .
သေစမ်း !! ခံလိုက်ရပြန်ပြီ ။
ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ် . . ပြည်လမ်းမှာဆွဲနေတဲ့ကားတွေက အရင်အဟောင်းတွေခတ်များများ . .
ဒီလိုမှန်းသိရင်ဗျာ . . ကြည့်မြင်တိုင်ဖက်မှာဆွဲနေတဲ့ အမှတ် (20) ဖူတွန် ကားသစ်ကြီးတွေကိုပြလိုက်ချင်စမ်းပါရဲ့ ။
မကြာပါဘူး . . . ဘေးက ကပ်လိုက်လာတဲ့ မင်းသားချောကြီး YBS က ” ငါမအိုသေး ‘” ဆိုပြီး ကျုပ်ကားကိုကျော်တက် ၊ ညာဘက်အစွန်လိုင်းအထိ ဖြတ်ဆွဲပြလိုက်ပါလေရော . . .
ကျုပ်တို့ကတော့အကျင့်ပါနေပြီလေ သိတယ်မှတ်လား . .
ဒါမျိုးမကြောက်လို့ ရွာရိုးလျှောက်နေတာဆိုတော့ . .
ကျုပ်ဘေးက ဘိုးတော်ကတော့ အလန့်တကြားနဲ့
“ဟေးးး . . ဘာဖြစ်တာလဲ ??!! ”
” ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျ . . Tomorrow Never Die ဒုတိယပိုင်းရိုက်ကူးဖို့ လေ့ကျင့်နေတာပါ ”
ဟဲဟဲ . . ဒီလိုလေး ပြောပြီး ခရီးသည်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုကိုလျှော့ချပေးရတော့တာပေါ့ ။
ကျုပ်ဘေးက ဖေါရိန်းဘိုးတော်ကတော့ ပွစိပွစ်ိနဲ့ လေဆိပ်မရောက်ခင်အထိပြောနေလေရဲ့ ။
ကျုပ်က ဘိုလိုကောင်းကောင်းမတတ်တော့ သူဘာတွေပြောနေမှန်းတော့သေသေချာချာမသိပါဘူးဗျာ . .
ကျုပ်နားထဲမှာတော့ ဘူးရှစ်တွေ စတုပစ် တွေနဲ့ ဒိန်းဂျား တွေကတော့ထောင်းလမောင်းကျေနေတော့တာပါဘဲ ။
** တခါတရံမှာ ကိုယ်ပြောချင်တာလေးအလွတ်ကျက်ထားပြီး သူများပြန်ပြောတာတွေနားမလည်တဲ့ “ဖွတ်စကေး(4 Skills မဟုတ်) လေး ရှိနေတာကပဲ ခတ်ကောင်းကောင်း လို့တွေးရင်း . . . . . ။
Aung Zay Min Rental Service
ဒီဘိုးတော်က ပြန်ပဲ ပြန်ပြီ၊အခုမှ မေးနေရသေးတယ်လား။
ဒေါ်စုတောင် မသိတဲ့သူကို အဖက်လုပ်ပြီး ပြောမနေပါနဲ့ ဗမာဒရိုင်ဘာရယ်။
ပြန်လာဦးမှာအစ်မရေ . .
ရွှေတိဂုံဘုရားကိုလည်း ဘာကြီးတုန်း ဆိုပြီးလုပ်နေသေး ။
ဘုရားမသ်ိတာကတော့ နားလည်ပေးပါတယ် ။
ကိုယ့်နိုင်ငံမှာတော့ ကိုယ့်အရပ်နဲ့ ကိုယ့်ဇာတ်ပဲ…
ဖော်ရိန်နာများ အလွယ်တကူ နားလည်နိုင်ဖို့ မလွယ်…
အိန္နိယဒရိုင်ဘာနဲ့ ဖော်ရိန်နာဟာသ “မာလိုးနိမ်း” ဆိုတာ အမှတ်ရမိပါရဲ့…
ကျနော်နဲ့ဆို မလွယ် ၊ သိပ်အမေးအမြန်းထူရင် ဘုတောချင်စိတ်က အစိုးမရ…
အမေးထူချက်ကတော့ လက်လန်တယ် ။
တချို့ဟာတွေ စာလေးမှာစိုးလို့ထည့်မပြောတာရယ်ပြီးတော့တချို့ဟတွေက ပြောမကောင်းလို့ရယ် ။
ကားမောင်းချိန် တစ်နာရီအတွင်းမှာ သူမေးတာလဲဖြေရသေး ကားမတိုက်အောင်လည်း ပြူးပြဲနေရသေး ဟားဟား
ဗမာဒရိုင်ဘာကို အားပေးတယ် လာ့
ဒါဆို နောက်ထပ် ဗမာဒရိုင်ဘာအခန်းဆက်တွေလာဦးမယ် အန်တီအေးရေ. .
လာမယ် လာမယ် ကိုတောပျော်ရေ
မိုးလေးအေးအေးနဲ့ အလုပ်ပါးတုန်းလေး တူးဆွနေရတာ ။
အောက်ကြေး ဘာရမတုန်းလောက်သိတဲ့ နိုင်ဂျံဂါးသားပဲ ဖစ်မယ်။
နိုင်ငံကြီးသားတစ်ယောက်က သူများနိုင်ငံက အရာတွေ စုတ်နေတာမြင်ရင်တောင် စုတ်နေတယ်လို့ ဗျောင်ပြောမထွက်ဖု။
ကျော်လည်း ဒီပို့(စ) ထဲမို့ အော်ရဲဒါဘာ၊
ကားမောင်းချိန်တစ်နာရီအတွင်းမှာ ပေါက်ပေါက်ဖေါက်သွားတာအများကြီးဗျ . .
သူတို့အလွန်တည့်တယ်ခင်ဗျ.. အဟေးဟေး .. ပြီးတော့လဲ အမှတ်ပေးသွားပါတယ်….အင်မတန်တော်တဲ့လူတွေပါတဲ့ဗျာ …. သိပလား..အာရပ်တွေအကြောင်း…
သားသားလည်း ဗမာဒွိုင်ဗာ ပါပဲ။
ဟိုတလောက သားသားရဲ့ ဘွားတော်က လမ်းပေါ်မှာ
နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူဘုရားပွဲ လှည့်နေကြတာကို မြင်ပြီး မေးတယ်။ ဘာလုပ်ကြတာလဲပေါ့။
ဘယ်လို ပြန် ရှင်းပြရမလဲ မသိ။
ကိုယ့်ဖွတ်စကေးနဲ့ကိုယ် . . .
”ဘုရား ၂၈ပါး လှည့်ပတ် သွားပြတာကို မြင်တဲ့သူတွေက ကြည့်ကြတယ်။ လှူဒါန်းကြတယ်ပေ့ါ။” ဖူးမြှော်ကြည်ညိုကြတယ်ဆိုတာကို ဘိုလို ဘယ်လို ပြောရမယ် မသိသေး။ အဲ့လို ပြောလိုက်တော့ သူက ထပ်မေးတယ်။
မင်းတို့ ဘုရားက ၂၈ယောက်တောင်လားတဲ့။
ဟောင်းတူဆေး အိုင်ဒုန့်နိုး။ အိုင်ခန့်အိတ်စပလိန်း
ဘာသာရေးပိုင်းဆိုင်ရာမျိုးတွေက အချင်းချင်းတောင်ရှင်ပြဖို့မလွယ် ။
နှစ်ကျိတ်ရှစ်ဆူအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆို ဗမာလိုပြောရင်တောင် မိုးလင်းသွားမယ်ဆိုတော့ . .
ဒါကြောင့် ဗမာဒရိုင်ဘာကြီးကားကို သဘောကျနေတာထင်ပါရဲ့
ဟုတ် . . ဟုတ်
အယ်လ်အေမှာလည်း.. အချိန်မပါတဲ့မီးပွိုင့်တွေချည်းပါပဲ..။ ဘယ်နှာမီးပွိုင့်က အချိန်ပါထည့်ရတာဖြစ်တာတုံး..။
အမေရိကန်တွေထဲ.. ယူအက်စ်သမ္မတဘယ်သူဆိုတာမသိသူ.. တော်တော်များတာမှာ.. ဒုသမ္မတများသွားမေးလို့ကတော့.. ကောလိပ်ကျောင်းမှာတောင်.. ၅၀% ရှိပါ့မလားမသိ…။
ဟင်​းဒါ​ကြောင်​့ သူကြီ​း​နေတဲ့နိ်​င်​ငံ မတိုးတက်​တာ။
ဒီမှာက တရုတ်ကြီးဆီကလို့ထင်တာဘဲ ။
ဒါပေမယ့် တိုင်မာက ပြတဲ့ဟာကပြပြီးမပြတာကမပြ ။
လမ်းအမှတ်အသားတွေလည်း နေတိုင်းမောင်းတဲ့သူတောင်ရွာပတ်သွားတယ် ။
မောင်းနေတုန်းကိုယ့်လမ်းကြောင်းမှာ အဖြောင့်ရောကွေ့ကြောရောပြထားပေမယ့် တချို့ဆိုပွိုင့်နားရောက်တော့မှ ကွေ့ကြောသီသန့်ဖြစ်သွားရောဗျ ။
သဂျီးတို့ဝေးနေတဲ့သူတွေပြန်လာမောင်းလို့ကတော့ ဟဲဟဲ ကြည့်လို့ကောင်းလိုက်မယ့်ဖြစ်ခြင်း
ဦးဆြာမိ ရယ် ..
အခွင့်အရေးရနေတုန်းမှာ မီးပွိုင့်တွေ အားလုံး standard တစ်ခု တပြေးညီလုပ်ခွင့်ရနေချိန်မှာ အာဏာ သိမ်းခံနေရတဲ့ မြို့တော်ဝန်ကြီး နဲ့ လေဘဲ ဖြိုး နေတဲ ့လေဖြိုးတို့ကို ပြောချင်ပေမဲ့ ပြောရဲဘူး ရယ် …
YBS လုပ် ရင်းနဲ့ ဘတ်စ်မှတ်တိုင်တွေလည်း တစ်ခါထဲ နေရာသေချာပြန်ချသွားရင် ကားကြပ်တာ ကို %တစ်ခုလောက် လျော့နိုင်မှာ ….JACA က အကြံပြု တဲ့ ထဲ ဘတ်စ်မှတ်တိုင်တွေ နေရာပြန်ချ ဖို့လဲပါပေမဲ့ ဥပက္ခာပြု ထားတာတွေ့ ရတာ ….
သဂျီးရဲ့ ဂဇက်က အမေဂျီးကားမီဒီယာမို့ 66D မရှိပါဘူးတဲ့ ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်အခုလို အခုလိုအချိန်အခုလိုနေရာကနေ CJကထူးဆန်းရဲ့အတွေးအမြင်ဝေဖန်ရေးလေးများလည်းမြင်ပါရစေခင်ဗျ ။
ကျနော်တို့က ချက်ကျလက်ကျမပြောတတ်သလို သတင်းယူသတင်းကောက်လည်း CJ ကြီးတို့လို လက်မပေါက်တော့ ပြောင်ချော်ချော်သာရေးနေရပါကြောင်းးးး
CJ ကြီးရဲ့ပို့စ်တွေကိုလည်း မျှော်နေပါကြောင်းးးးး
ဟဲ ဟဲ ၊ တားတားကတော့ လေဖြိုးတို့ အဖွဲ့ကို မကြောက်ဘု ။
အခုဆို တားတားတို့ ရွှေပါရမီ ( အရှင်ဆန္ဒာဓိက ) အဖွဲ့ နှင့် ၊
ကွီးဖြိုး တို့ အဖွဲ့ ဆိုတာ လုံးထွေးနေတာဘဲ ၊ မျောက်စိတောင် နောက်တယ် ။
တားတားတို့ ဘုန်းဘုန်း အရှင်ဆန္ဒာဓိက လုပ်သမျှပွဲတွေ မှန်သမျှ ၊
သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်တို့ ၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးတို့ ဆိုတာ ၊
မလာဘဲကို မနေဘူး ၊ အောတိုက်ဘဲ တရုန်းရုန်း နှင့် ။
အဲဒီလေဖြိုးတို့အဖွဲ့.. ဆန်ဖရန်စစ္စကိုကို ညီအစ်မမြို့ကိစ္စလာမယ်တဲ့..။
မြို့တော်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို.. မြို့တော်ဝန်မအပ်ပဲ.. ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အဆင့်နဲ့ဝင်ရှုပ်.. အဲ..အဲ.. ဝင်လုပ်နေတာကို.. တွေ့ရင်ပြောလိုက်မယ်..။
ဘယ်နှာ.. ဒေါ်စုက.. လက်နဲ့ရေး..။ သူက ခြေနဲ့ဖျက်..။
ပြောတော့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေး..။ တိုင်းရင်းသားနယ်မပြောနဲ့.. ရန်ကုန်မှာတောင်မရ..။
နေရာ ပြန်ချထားတာ တွေ့နေရပါတယ်။
ဥမပါ. . .ဂဗာအေးလမ်းပေါ်က ချော်တွင်းကုန်းမှတ်တိုင်-
အရင်က မီးပွိုင့်နားမှာ။ အခု မီးပွိုင့်နဲ့ ဝေးဝေးကို ပို့လိုက်ပြီ။
မှတ်တိုင်တော်တော်များများကို အရင်က သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာကနေ လမ်းကြောရှင်းစေမယ့် နေရာတွေဆီ ပို့ထားပါတယ်။
ခက်တာက. . .
ဘတ်စ် မှတ်တိုင်က လူစည်ကားရာ နေရာနဲ့ ဝေးရင် မှတ်တိုင်အထိ မသွားပဲ လူစုစု နေရာတွေမှာ ပေတေပြီး ရပ်စောင့်နေကြတာ။
ဘတ်စ်တွေကလည်း မှတ်တိုင်အထိ မရောက်လည်း အတင်အချ လုပ်ချင်နေကြတုန်း။
လိုင်းနံပါတ် ၃၇(အရင် BRT) ကတော့
မှတ်တိုင်မဟုတ်တဲ့နေရာကို လုံးဝ မရပ်။
ဆိုတော့ သက်ဆိုင်ရာက လမ်းကြောရှင်းအောင် ပြောင်းလဲပေးသင့်တာ ပေးရင်တောင်. . .
ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီး လိုက်နာမယ့်သူတွေ လောက်လောက်လားလား မရှိသေးဘူးလို့ ကျနော်တော့ မြင်မိတယ်။
အဲ့လူတွေ အသည်းယားတယ်.. မှတ်တိုင်အထိမစောင့်ဘဲ ရပ်စောင့်နေကြတာ.. မြေနီကုန်း ကုန်းတံတားအဆင်းဆို.. ကုန်းအောက်က တက်လာတဲ့ကားရယ်.. ကုန်းပေါ်က ဆင်းလာတဲ့ကားရယ်.. တံတားကုန်းအဆင်းမှာ စောင့်နေတဲ့လူအုပ်ရယ်.. ရပ်ပေးတဲ့ ဘတ်စ်တွေရယ်.. ရှုပ်ယှက်ခတ်နေတာပဲ…
ယာဉ်ထိန်းရဲတွေက ကြပ်ကြပ်မတ်မတ်နဲ့ သေချာလုုပ်ရမှာ.. ပြောတဲ့ကြားက ပေပြီးရပ်စောင့်နေရင် ဖမ်း…
​ဒေါ်စု​တောင်​မသိတဲ့လူများ ခင်​ဗျားမို့ အ​ရေးလုပ်​ပြီး စကားပြန်​​ပြော​နေ​သေးတယ်​။ ​နောက်​ဆို​လေဆိပ်​ လဝက ကိုမှာထားရမယ်​ ဒီ​လောက်​ဗဟုသုတနဲတဲ့သု​တွေ ​ပေးမင်ဝင်​ပါနဲ့လို့။ ​ပြောသာ​​ပြောရတာပါ ဟိုကလာတဲ့သူ​တွေက ​ပေးပြီးဝင်​လို့ရမှန်​း သိ​နေမှာပါ။
ကာစတန်မာဆားဗစ်ဆိုတော့လည်းဗျာ . . .
ဒါပေမယ့် တချို့ ပညာရှင်အုပ်စုတွေကတော့ ကိုယ့်ပညာရပ်ကလွဲရင် တခြားဟာတွေစိတ်မဝင်စားတတ်ကြဘူး ။အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေတော့တွေ့ဖူးပါရဲ့
တီလေးရဲ့…အာရပ်တော်တော်များများလူတွေ ဒေါ်စုကိုမသိပါဘူး ..ကျော်..အခုဒူဘိုင်းကကုန်ပဏီတစ်ခုနဲ့ အလုပ်လုပ်နေလို့သိတာ..
ဒူဘိုင်းဆိုတာ အာရပ်ကမ္ဘာက အတော်ပွင့်လင်းတဲ့နေရာနော်….သူတို့မသိကျဘူး …
..ကျောက်စ်ကိုမေးကြည့်ပါလား …. ဘယ်လောက် ဂလိုဘယ်အိုင်ကွန် ပြောပြော ..ဒီမိုကရေစီတောင်မသိတဲ့ဟာပဲကို …မာတင်လူသာကင်းလဲမသိ…မာသာထရီစာလဲ မသိ… နယ်ဆင်မင်ဒဲလားလဲမသိ…
တချို့က ကိုယ့်ပညာရပ်အကြောင်းဘဲစိတ်ဝင်စားတာ . .
အာရပ်တွေကို ဘွားတော်ပုံပြပြီး သိလား သွားမမေးနဲ့ …
မိန်းမချောချောလှလှဆို တော်ကောက်ဖို့လောက်ပဲ စိတ်ဝင်စားတာ…
သူတို့ဓလေ့ထုံးစံကိုက မိန်းမဆို ဘယ်မိန်းမမှ အထင်မကြီး…
သံမဏိလေဒီ မာဂရက်သက်ချာကို ဘယ်လိုမှတ်ချက်ပေးတယ်ဆိုတာသိရင် လေသွားမယ်…
ကိုယ်လာမယ့်နိုင်ငံ ဘာလဲတောင် မလေ့လာထားဘူးလား.. မုန်းဖို့ကောင်းတာ..
ဟိ.. စမီးတုန်းကလည်း ၂၄ ပစ္စည်း ဘာလဲ လာမေးနေလို့ ပတ်ပြေးခဲ့ဖူးတယ်.